Egwuregwu nkịta 5 kacha mma maka gam akporo | Androidsis
Egwuregwu nkịta 5 kacha mma maka gam akporo
Aaron Rivas | 20/10/2021 20:45 | Emelitere ka 20/10/2021 20:48 | Ngwa gam akporo, Mobiles
Ha na -ekwu na ezigbo enyi mmadụ bụ nkịta, enwerekwa ọtụtụ eziokwu na nke a. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime anụmanụ kacha hụ n'anya, na -ahụ n'anya, na -ege ntị ma na -egwuri egwu. Ọ bụ ya mere ọ na -adịkarị izute onye nwere otu anụ ụlọ ma ọ bụ karịa, ebe ọ na -abụkarị mkpụrụ obi nke ọtụtụ ụlọ, ma ugbu a anyị na -enyefe ha post, nke anyị depụtara egwuregwu nkịta kacha mma ka ị nọrọ na Jiri ọwa mmiri mepere emepe kporie ndụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ya.
N'ebe a, ị ga -ahụ ndepụta nke egwuregwu nkịta kacha mma maka gam akporo nke dị ugbu a na ụlọ ahịa Google Play. Ha niile nweere onwe ha na, n'ezie, otu n'ime ihe kacha ebudatara, egwu na ewu ewu na ụlọ ahịa.
N'okpuru ị ga -ahụ usoro egwuregwu nkịta kacha mma maka ekwentị gam akporo. Ọ dị mma ịmara, dịka anyị na -eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
1 DogHotel - Soro nkịta gwuo egwu
2 Nkịta Simulator Online
3 Obodo nkịta: Egwuregwu ụlọ ahịa Pet & Dog
4 Nkịta - Ajụjụ gbasara ụdị ewu ewu niile
5 Boo - Nkịta kachasị mma
DogHotel - Soro nkịta gwuo egwu
Iji bido n'ụkwụ aka nri, anyị nwere DogHotel - Soro nkịta na -egwu, egwuregwu a ma ama na Storelọ Ahịa Play nke nwere ihe nbudata ihe karịrị nde iri n'ime ụlọ ahịa naanị. Ma ọ bụ na egwuregwu a ị ga -egwu onye njikwa ụlọ oriri na ọ canụ ,ụ canine, nke nwere ọtụtụ nkịta nọ ebe ahụ na a ga -elekọta ha anya ma lekọta ha dịka o kwesiri, n'ihi na anyị na ndị ezigbo mmadụ na -emekọ ihe.
Nke a bụ onye njikwa họtel, ọ bụ ya mere ị ga -eji rụọ ọtụtụ ọrụ na -ekwe nkwa na nkịta nọ ebe ahụ nwere obi ụtọ, afọ ojuju na afọ ojuju. Ọ bụghị ihe niile dị nfe, mana ọ bụghịkwa ihe siri ike, ọkachasị n'ihi eziokwu ahụ bụ na, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịdị ntakịrị, ha na -a attentiona ntị n'ikpeazụ. Ị ga -emerịrị mkpa na ebumnuche nke nkịta ọ bụla, dị ka inyere nwa nkịta Granny Edith aka ifelata, ịkụzi poodle Lizzy aghụghọ, na ịzụ Labrador Lucky ịbanye na ngalaba mgbanyụ ọkụ wee bụrụ dike.
Ọ bụ egwuregwu egwuregwu anụ ụlọ mebere nke ị ga -elekọta nkịta 8 dị iche iche. Ha niile bụ agbụrụ dị iche iche, yabụ ị ga -amụtakwa gbasara ha na ihe ha bụ. Ha niile nwere agwa dị iche iche, yabụ na ị ga -eme mgbanwe ka ha ga -esi zụọ ha n'ụzọ kacha mma wee nye ha ọzụzụ ha kwesịrị ka a zụọ, irube isi na ịdị jụụ, nke na -adịchaghị nfe, ebe ọ bụ na ha adịghị mma.
Soro nkịta ọ bụla rụọ ọrụ egwuregwu wee merie ha ka ha wee mụta ma na -ekpori ndụ ọnụ. Ị nwekwara ike chọọ mma ma gbasaa ebe obibi ahụ iji mee ka ọ saa mbara, nwee ntụsara ahụ na obi ụtọ maka canine bi n'ime ya. N'aka nke gị, ị gaghị na -agara ha mgbe niile; mgbe ụfọdụ ka ha na -egwu ibe ha; Ọ masịrị ha!
Nkịta Simulator Online
Nke a bụ Nnukwu egwuregwu ịme anwansị nwere eserese 3D dị ịtụnanya na ihe nkiri iji gafere oge. N'ebe a, ị nwere ike họrọ ụdị nkịta kachasị amasị gị ma soro nkịta ndị ọzọ egwu na ọnọdụ ọtụtụ mmadụ n'ịntanetị. Ị nwekwara ike ịmụ nwa nkịta wee bie ndụ nkịta nwere aha na onyonyo ahaziri iche.
Ọzọkwa, ka ị na -aga n'ihu egwuregwu ahụ, ị nwere ike imeghe agbụrụ ọhụrụ; enwere ọtụtụ inyocha ma mara. N'ịbụ onye na -eme simulator, ị ga -amata ndụ nkịta, na -egwu egwu, na -alụ ọgụ na nkịta ndị ọzọ ma na -enyocha ihe niile gbara gị gburugburu. Ị ga -ahụ onwe gị n'ọnọdụ ndị nwere ike ịdị ize ndụ, dịka mgbe ndị isi pụtara na ị ga -echebe ezinụlọ gị pụọ na ha, na -aka akara mpaghara ma ghara ikwe ka ha merụọ gị ahụ.
N'aka nke ọzọ, enwere ọtụtụ ọrụ na mmezu nke ị ga -emerịrị ma merie ka ị na -aghọ nkịta ka mma. Ma ọ bụghị, enwere ihu igwe siri ike maka ịgbakwunye ezigbo ya, nke nwere ike ime ka mmiri zoo, anwụ ma ọ bụ nwuo; a na -ekwe nkwa ahụmịhe nke ndụ n'ezie. Ọzọkwa, na mgbakwunye na ịlụ ọgụ na ndị egwuregwu ịntanetị ndị ọzọ sitere gburugburu ụwa, ị nwere ike ịme enyi na Dog Simulator Online, mepụta ezinụlọ, banye na ọkwa ma hụ mgbe ndị enyi gị nọ n'ịntanetị ka ha bụrụ akụkụ nke ngwugwu ha. Ihe ọzọ bụ na ọ dakọtara na ịchekwa data na ozi n'igwe ojii, iji chekwaa ọganihu.
Developer: Egwuregwu Turbo Roket
Obodo nkịta: Egwuregwu ụlọ ahịa Pet & Dog
Egwuregwu ịme anwansị nkịta ọzọ bụ Dog Town, nke ị ga -egwu onye nkịta. N'ebe a, ị ga -ahụkwa ọtụtụ ụdị nkịta, nke ị nwere ike nweta n'ụlọ ahịa obodo.
N'egwuregwu a, enwere ọtụtụ ọrụ ị ga -eme, mgbe niile ka gị na nkịta na -egwu egwu ma na -egwuri egwu ka ị na -elekọta ha ka ha nwee obi ụtọ; Saa ha, nye ha nri, lekọta ha, mee ha obi ụtọ na ihe ndị ọzọ. Eserese dị na 3D ma enwere nkịta karịrị 95 ịnakọta ma lekọta ya, nke ọ bụla nwere agwa na omume dị iche iche dị adị n'ezie.
Obodo Nkịta: Nkịta & Anu ulo
Developer: Egwuregwu Frismos
Nkịta - Ajụjụ gbasara ụdị ewu ewu niile
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ihe ọmụma gị gbasara nkịta na ọtụtụ narị ụdị anụmanụ dị n'ụwa, egwuregwu a dị mma maka gị. Ọ bụ aha na nwalee ihe niile ị maara gbasara nkịta site na ajụjụ, ajụjụ, ajụjụ na ilu.
Boo - Nkịta kachasị mma
Iji mechaa akwụkwọ nchịkọta a, anyị nwere Boo, nkịta kachasị dị nro ma mara mma n'ụwa. Boo bụ nkịta nke ị ga -elekọta ma na -elekọta. Soro ya gwuo egwu ma nye ya ịhụnanya ime ka ọ nwee ọineụ.
Developer: Coco Kpee Site TabTale
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwuregwu nkịta 5 kacha mma maka gam akporo
Nhọrọ kacha mma maka Flickr
Onye -nwe nke Mgbaaka: Agha - Nduzi mbido